♡♬ ရောရောသမမွှေ ဘလော့ဂ်မှ♪♪ ကြိုပါဆိုတယ်♪♪ မိတ်ဆွေများ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့တော်မူကြပါစေ♬♡
ကိုဗဈ-၁၉ လူနာသဈ ၁,၀၁၀ ဦး၊ သဆေုံးသူ ၁၁ ဦး ထပျတိုးလာ
ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါ ဓာတျခှဲအတညျပွု လူနာသဈ ၁,၀၁၀ ယောကျနဲ့ သဆေုံးသူ ၁၁ ယောကျထပျတိုးလာတယျလို့ ကနျြးမာရေးနဲ့ အားကစားဝနျကွီးဌာနက အောကျတိုဘာ ၁ ရကျ ည ၈ နာရီမှာ ထုတျပွနျပါတယျ။
စကျတငျဘာ ၃၀ ရကျ ည ၈ နာရီမှ ဒီနေ့ အောကျတိုဘာ ၁ ရကျ ည ၈ နာရီ အတှငျး ဓာတျခှဲနမူနာ စုစုပေါငျး ၅,၃၅၂ ခုအား စဈဆေးပွီးစီးခဲ့ရာ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါ ဓာတျခှဲအတညျပွု လူနာသဈ ၁,၀၁၀ ဦး တှရှေိ့ရတာဖွဈပါတယျ။ လူနာသဈတှနေဲ့ ပတျသကျတဲ့ အသေးစိတျ အခကျြအလကျတှကေိုတော့ ထုတျပွနျကွညောခွငျး မရှိသေးပါဘူး။
မွနျမာနိုငျငံမှာ ဒီကနညေ့ ၈ နာရီ အထိ ကိုဗဈ-၁၉ အတညျပွုလူနာပေါငျး ၁၄,၃၈၃ ယောကျ၊ သဆေုံးသူ ၃၂၁ ယောကျနဲ့ ဆေးရုံကဆငျးခှငျ့ပွုခဲ့သူပေါငျး ၄,၁၅၆ ယောကျ ရှိတယျလို့ ကနျြးမာရေးဌာန ထုတျပွနျခကျြအရ သိရပါတယျ။
ရေးသားသူ မောင်စိုး at 10:46 PM No comments:
မုန့်ဟင်းခါးတစ်ပွဲ ငါးထောင်ပေးစားပြီး စီးပွားရေးကျနေသည်ဟု ပြောနေသည့် သူဌေးကြီးများစကား လုံးဝလက်မခံဟု စီးပွားရေးကော်မတီဝင် ဦးအေးလွင် ပြော
မုန့်ဟင်းခါးတစ်ပွဲ လျှင် ကျပ်ငါးထောင်ပေးစားကာ စီးပွားရေးကျနေသည်ဟု ပြောနေသည့်သူဌေးကြီးများ၏ စကားကို လုံးဝလက်မခံကြောင်း NLD ပါတီမှ ဗဟိုစီးပွားရေးကော်မတီဝင် ဦးအေးလွင်က ပြောကြားလိုက်သည်။
လက်ရှိ၌ စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းအခက်အခဲဖြစ်သည်များကို လက်ခံပြီး NLDအစိုးရ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အား ကန့်လန့်တိုက်နေ့သည့် သူဌေးကြီးများ ၏ စကားများကိုတော့ လက်မခံကြောင်း ဦးအေးလွင်က ဆိုသည်။
“လူလတ်တန်းစားတွေစားတဲ့ မနက် မနက် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကြီးတွေသွားကြည့်ပါ။ ကော်ရည်တစ်ပွဲငါးထောင် ၊ မုန့်ဟင်းခါးတစ်ပွဲငါးထောင် ကော်ဖီလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက် သုံးထောင် သောက်ပြီးတော့ ထိုင်ပြောနေတဲ့ သူဌေးကြီးတွေက ပြောတဲ့ စီးပွားရေးကျနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်တို့လုံးဝ လက်မခံပါဘူး။ ဒါအမှန်တရားပြောတာ။
ရှေ့သို့ ဆက်ဖတ်ရန် ကလစ်ပါ »
ရေးသားသူ Unknown at 4:48 PM No comments:
အိမ်သာထဲ ဖုန်းပြုတ်ကျတာ ပြန်ကောက်ဖို့ ကြိုးစားရင်း ဆိုးရွားလွန်းတဲ့ အခြေအနေနဲ့ ကြုံလိုက်ရတဲ့ အမျိုးသား
တရုတ်နိုင်ငံ Guandong ဒေသက အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ သူ့ရဲ.အိမ်က အိမ်သာထဲ ဖုန်းလွတ်ကျတာကို ပြန်ကောက်ဖို့ ကြိုးစားရင်း ဒုက္ခအကြီးအကျယ် ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။
ဖြစ်ရပ်ကတော့ ဗုဒ္ဒဟူးနေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး မီးသတ်သမားတွေက မနက် ခြောက်နာရီခွဲကျော်မှ သူ့ကို ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာပါ ။ မီးသတ်သမားတွေ ရောက်လာချိန်မှာ ဒီအမျိုးသားဟာ အိမ်သာ ကြမ်းပြင်မှာ လက်တစ်ဖက်က အိမ်သာခွက်ထဲ နှိုက်လျှက် ပြန်ထုတ်မရတဲ့ အခြေအနေနဲ့ တွေ့ရတာပါ။
အမျိုးသားဟာ အိမ်သာထဲမှာ အခုလို အခြေအနေနဲ့ မနက် ၂ နာရီထဲက ကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမယ့် ကံဆိုးချင်တော့ သူက အိမ်မှာ တစ်ယောက်တည်း နေတာမို့ ဘယ်သူကမှ မကူနိုင်ခဲ့ပါဘူး ။ သူ့အော်ဟစ်သံကိုလည်း ဘယ်သူမှ မကြားပဲ မနက် ငါးနာရီထိုးမှ အိမ်နီးချင်းက ကြားခဲ့တာပါ ။ အိမ်နီးချင်းက မီးသတ်သမားတွေကို အကူအညီတောင်းဖို့ နောက်ထပ် တစ်နာရီ
ရေးသားသူ Unknown at 5:05 AM No comments:
Hospital Manager Sasho Stojcev ဆေးရုံမှ တာဝန်ရှိသူတွေဟာ Jasminka Velkovska လို့ အမည်ရတဲ့ အမျိုးသမီးကို ခွဲစိတ်ကုသမှု လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ အူမကြီးနဲ့ ယောနိလမ်းကြောင်းကို မှားယွင်းချိတ်ဆက်ကာ အဆုံးသတ်ပေးမိလို့ အခုအခါမှာတော့ Jasminka ဟာ လေလည်တဲ့အခါတိုင်း သူမရဲ့ မျိုးပွားအင်္ဂါကနေ အသံထွက်နေရှာပါတယ်။
Jasminka ဟာ အူမကြီးကင်ဆာရောဂါခံစားခဲ့ရပြီး Hospital Manager Sasho Stojcev ဆေးရုံကို တက်ရောက်ခွဲစိတ် ကုသမှု ခံယူခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတွက် သူမမှာ အကြွေးတွေပတ်လည်ဝိုင်းနေခဲ့ပြီး ခွဲစိတ်မှုကလည်း ကမောက်ကမ ဖြစ်ခဲ့ရတာမို့ သူမအနေနဲ့ လျှော်ကြေးတောင်းခဲ့ပေမယ့် ဆေးရုံတာဝန်ရှိသူတွေက ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒေသရုပ်သံတွေနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ မပျော်မရွှင်တဲ့ပုံစံ ဖြစ်နေတဲ့ Jasminka က ” ဒေါက်တာတွေက မေးတယ် … လေလည် ရသလား … ဆိုတော့ … ကျွန်မက လေကတော့ လည်ရပါတယ် … ဒါပေမယ့် ယောနိကနေ ထွက်နေခဲ့တယ်လို့ ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ် .. အဲဒီတော့ ဆရာဝန်တွေက … မကြာခင် ပြန်အဆင်ပြေမှာပါ … ဒါဟာ ခဏတာပါဘဲလို့ ပြောခဲ့
တယ် … အခုတော့ တာဝန်မယူဘူး ” လို့ ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။
Hospital Manager Sasho Stojcev ဆေးရုံဟာ မက်ဆီဒိုးနီးယးနိုင်ငံ မြို့တော် Skopje မှာ တည်ရှိတာဖြစ်ပြီး၊
ရေးသားသူ Unknown at 5:01 AM No comments:
Labels: ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေပါ
တရုတ်ပြည်က လူချမ်းသာတစ်ဦးရဲ.သားက သူ့ခွေးအတွက် iPhone7ရှစ်လုံးဝယ်ပေးခဲ့
Coco လို့ အမည်ရှိတဲ့ ခွေးမလေးဟာ သူမရဲ. လက်ဆောင်သစ်တွေနဲ့ အတူ တွဲရိုက်ထားတဲ့ ပုံရိပ်တွေ လူမှုကွန်ယက်ပေါ် ရောက်လာပါတယ်။
သူမရဲ. ပိုင်ရှင်က သူမအတွက်ဆိုပြီး iPhone7ရှစ်လုံးဝယ်ပေးထားတာပါ ၊ သူမရဲ. ပိုင်ရှင်ကတော့ တရုတ်သူငှေး Wan
ရေးသားသူ Unknown at 4:58 AM No comments:
လိင်မှုဘ၀သာယာရေးအတွက် Testosterone တိုးမြင့်စေမည့် နည်းလမ်းများ (18+)
Testosterone ဆိုတာကတော့ အမျိုးသားတွေအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ဟော်မုန်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားလိင်အင်္ဂါပစ္စည်းတွေ ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ရော ကြွက်သားနဲ့ အရိုးကြီးထွာဖို့၊ ခန္ဓာကိုယ်အမွှေးအမျှင်တွေ ပေါက်ဖို့အတွက်တို့ကိုပါ အရေးကြီးပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ လိင်မှုကိစ္စစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ Testosterone ပမာဏကို သဘာဝအတိုင်း တိုးတက်များပြားလာပြီး ခန္ဓာကိုယ်တောင့်တင်းမှုနဲ့ အိပ်ရာအတွင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းလာစေဖို့ ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းတချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်ကြွယ်ဝသည့် စားစရာများ များများစားပါ။
အခုခေတ်အမျိုးသား (၃)ယောက်မှာ (၁)ယောက်က သွေးဖိအားများတဲ့ပြဿနာကို ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။ ဒီပြဿနာက သင့်ရဲ့နှလုံးကို ဆိုးကျိုးပေးပြီး သွေးလည်ပတ်စီးဆင်းမှုကို ချို့ယွင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အမျိုးသားလိင်အင်္ဂါထောင်မတ်မှုကို အားနည်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်က ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်ပါရှိတဲ့ စားသောက်စရာတွေ မှီဝဲပေးခြင်းအားဖြင့် သင့်ရဲ့သွေးဖိအားကို ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ပမာဏမှာ ရှိနေစေပါတယ်။ ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ စားသောက်စရာတွေကတော့ အာလူး၊ ဟင်းနုနွယ်၊ သခွားမွှေး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ သစ်တော်သီး၊ ငှက်ပျောသီး၊ ကီဝီသီးနဲ့ ဒိန်ချဉ်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အငံဓာတ်၊ ဆိုဒီယမ်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ရေနဲ့အတူလှည့်ပတ်ပါတယ်။ ဆားငံတာတွေ များများစားရင် သွေးကြောတွေတလျှောက် ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကို ရောက်ရှိသွားပြီး သွေးဖိအားကိုတိုးစေပါတယ်။ သွေးဖိအားများခြင်းက လိင်တံထောင်မတ်မှုကို
ရေးသားသူ Unknown at 4:54 AM No comments:
ချစ်သူနဲ့ လက်တွဲတွေခိုင်မြဲနေစေဖို့ သိထားသင့်တဲ့ အချက်(၁၁)ခု
ချစ်သူနှစ်ဦးဆက်ဆံရေးတစ်ခုမှာ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာက ကံတရားချည်းသက်သက်မဟုတ်ပါဘူး။ လက်တွဲတွေ ခိုင်မြဲနေစေဖို့ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ဂရုတစိုက်လုပ်ဆောင်ရမယ့် အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ လွယ်ပါတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေရဲ့ အလေ့အကျင့်တွေကို အတုယူလုပ်ဆောင်နိုင်အောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ နှစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး မိသားစု၊ မိတ်ဆွေတွေကို မညည်းညူတတ်ကြပါဘူး။
နှစ်ကိုယ်ကြားကိစ္စမှာ အပြင်လူတွေ ၀င်မပတ်သက်သင့်ဘူးဆိုတာကို ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေကြတဲ့ စုံတွဲတိုင်း သိထားကြပါတယ်။ အရေးကိစ္စတစ်ခုခုပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ အပြင်လူတွေကို ပြောပြတိုင်ပင်မယ့်အစား အချင်းချင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးတတ်ကြပါတယ်။ အပြင်လူတွေကို ဖွင့်ပြောမိပြီဆိုတာနဲ့ နှစ်ဦးသားဆက်ဆံရေးကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေမယ့်အရာတွေကပဲ စောင့်ကြိုနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂။ အခြားသူတွေနဲ့ မနှိုင်းယှဉ်တတ်ကြဘူး။
ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေကြတဲ့ စုံတွဲတိုင်းဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အရှိအတိုင်းလက်ခံပြီး ချစ်တတ်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ အခြားသူတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လေ့မရှိပါဘူး။ ဒီလိုနှိုင်းယှဉ်တာက ယုတ္တိမတန်ပဲ
ရေးသားသူ Unknown at 4:51 AM No comments:
ယခု ပို့စ် အသစ်များကို ကြည့်ရန်
" ဖတ်စရာ စာအုပ်ပေါင်း တစ်ထောင့်ငါးရာအုပ် "
" အသုံးဝင်မယ့် ဖုန်းနံပါတ်များ " ( ကား၊ ရထား၊ လေယာဉ်၊ ဆေးရုံ၊ ပုလိပ်)
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် လိုအပ်သော အရေးပေါ်ဖုန်းနံပါတ်များ အမြန်လမ်းရှိ ဓါတ်ဆီဆိုင်များ၏ ဖုန်းနံပါတ်များ ၁။ မိုင်တိုင် ၃၉ န...
သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေတို့ဖတ်ဖို့ တာတေ သရဲစာအုပ်လေပါဖတ်ကြည့်ပါနော်။ ဖိုင်ကပျက်သွားလို့ ပိုစ် မှာပြန်တင်ပေးထားပါသေးတယ်......ဒါပေမဲ့ တာတေ ပီယဆေ...
" တြိစက္ကရဲ့ သရဲစာအုပ် များ "
(၁) တြိစက္က လေးကျွန်းကိုင်ကွင်းပိုင်မစ္ဆာ http://www.mediafire.com/ download/r663iixnnb0m495/ တြိစက္က_လေးကျွန်းကိုင်ကွင်းပိုင်မစ္ဆာ.pdf ...
" မြီးကောင်ပေါက် ပျိုမေလေးများနှင့် အရွယ်ရောက်သမီးရှင်များ ဖတ်ရန် "
မြီးကောင်ပေါက်လေးတွေဟာ သဘာဝအလျောက် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေ ၊ စိတ်ကစားမှုတွေ ၊ အချစ်ဆိုတာ တွေကို သူ့အရွယ်အလိုက် ခံစားလာတတ်ကြပါတယ်...
"မျောက်ကုန်သည်" ဟိဟိ လည်သလား မမေးနှင့် (ပုံပြင်)
တစ်ရံရောအခါက ရွာတစ်ရွာတွင် လူတစ်ယောက်ရောက်လာပြီး မျောက်တစ်ကောင် ငွေ ၅၀၀၀ နှင့် ဝယ်မည်ဟု ကြေငြာသည်။ ရွာသားများလည်း မျောက်ပေါသည့်နယ်ဖြစ်...
" မြန်မာ့ သရဲတစ္ဆေ စာအုပ် ပေါင်းချုပ်" (Myanmar Ghost Story v1.0.apk)
သရဲစာအုပ်ပေါင်း ၄၀ကျော်ကို apkတခုထဲနဲ့ ကြည့်နိုင်တဲ့ myanmar Ghost Story apk
" သားမက် နဲ့ ယောက္ခမ နားပြိုင်လေးကြတော့ လောကကြီး ကမောက်ကမ ဖြစ်ရောလားကွယ် "
ကျွန်တော် တို့ ငယ်ငယ် က ရွာမှာ တွေ့ကြုံ ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ် အပျက်လေး တစ်ခု ကို ပြောပြချင်ပါတယ်...။ ဒေါ်ရှင်မ ဆို တဲ့ အသက် (၆၀) ကျော် အဖွား...
ကား မ မောင်းတတ်သေး တဲ့ fri များ အတွက် ,ဗဟုသုတ နှင့် အ ခြေခံနားလည် ရန် ရည်၇ွယ်သည် ပထမ အ နေနဲ့ manual gear type...
" အချစ် ဂါထာ (မန္တာန်) "
ဒီ Spell (မန္တာန်) ဟာ လပြည့်နေ့များမှာပိုမိုထိရောက်တတ်ပါတယ်။ သင်နှင့်သင့်ချစ်သူတို့၏ပုံများကို မျက်နှာချင်းဆိုင်ထပ်၍ စက္ကူကလစ်ဖြင့် တွဲညှပ်ပ...
Mi Notebook Pro X 15 specifications - *Mi Notebook Pro X 15 specifications* - 15.6-inch (3456 × 2160 pixels) 3.5k OLED Super Retina display with 100% sRGB and sRGB DCI-P3 color gamut,...
ဆိုဒ်နာမည်ပြောင်းလဲထားပါသည် - မင်္ဂလာပါဗျာ www.soesoehein.bolgspot.com ကို ကျွန်တော် အရင်ရေးပြီးတဲ့ စာအုပ်တွေမှာ ထည့်သွင်း ကြော်ညာထားပါတယ်။ အခု www.soesoehein.bolgspot.com ကို ရောက်ရှိေ...
ဒါလေး တစ်ချက် ဖတ်ကြည့်ထားသင့်တယ်..လိုရမယ်ရပေါ့
ကား၊ ရထား၊ လေယာဉ်ပျံ၊ ဆေးရုံ၊ ပုလိပ်၊ အရေးပေါ်၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ နိုင်ငံခြားသံရုံးများ၏ လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ် များ အစရှိသည်တို့ကို အရေးပေါ် လိုအပ် သူမိတ်ဆွေများ အနေနှင့် "အသုံးဝင် ဖုန်း နံပါတ်များ tab ကိုနှိပ်ပြီး ကြည့်ရှုရှာဖွေနိုင် ရန် ရောရောသမမွှေမှ တင်ဆက်ပေးထား ပါတယ်..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..... ((ရောသမ))
လာလည်သူ ချစ် visitors များ
-စုန်း သရဲ၊ ကဝေ မှော်စာအုပ်များ (၁) တြိစက္က လေးကျွန်းကိုင်ကွင်းပိုင်မစ္ဆာ (၂) တြိစက္က ကွင်းပိုင်မစ္ဆာနှင့်မဖဲဝါ (၃) ရာဇဂဏီလူသူတော်သျှောင်တစောင်းနှင့်ထ (၄) (မောင်ညိုမှိုင်း) နရသိန်ပြန် အိပ်မက် (၅) တိစက္ခ ပိုးရွှေတောင်လုံးကျော် မှော်ဝင်ကြိုး (၆)တြိစက္က စက္ကောမကေသရီ (၇) တိစက္ခ မျက်နှာရိုင်း လှိုင်းဝိညာဉ်လမ်း (၈) တြိစက္ခ ဂျူပီတာပေါ်မှပဉ္စလက်မိစ္ဆာ (၉) တြိသင်္ခ မျောက်တရာမှတစ်ပွဲစားတာတေ (၁၀) တိသင်္ခ ပတ္တမြားသပိတ်တော် (၁၁) တိသင်္ခ နှင်းဖြူတောင်မာယာရှင် (၁၂)ကြမ္မာဆိုးဝင်တဲ့တစ္ဆေအိမ် (နွေတမာန်) (၁၃)တကျော့ပြန်ဝိညဉ် (ဆောင်းလုလင်) (၁၄)၀ိညဉ်ခေါ်ရာ (နွေတမာန်) (၁၅)ဒိဗ္ဗကျော်စွာ - ရသေ့ဝိဇ္ဖာဦးခန္တီ (၁၆)သောကြာနေ.လကွယ်ည (သတိုးတေဇ) (၁၇)သေမင်းရှုံးတဲ့လောင်းကစား (သတိုး (၁၈)သရဲပွဲတော်ည (သတိုးတေဇ) (၁၉)အမှောင်ကြောက်သူ (သတိုးတေဇ) (၂၀)အိမ်နီးချင်းတစ္ဆေ (၂၁)သူတော်ငတေ (၂၂)မရဏစာရွက် မအိုစာ (၂၃)နှစ်ဘ၀ရွှေသိုက် မအိုစာ (၂၄)ဒေ၀စကြာ - သံသရာအကျဉ်းသား (၂၅)မြွေသိုက်(ဒဿကျော်စွာ) (၂၆)ကြောင်မျက်ရှင်(ဒတ္တကျော်စွာ) (၂၇)ယောယုဝတီရွာသူ(ဒေ၀တာ) (၂၈)ကြောက်စိတ်(ဒေ၀တာ) (၂၉)ဒေးစွန်ပါဝန်းကျင်မှဂမ္ဘီယအံ့ဖွယ် (၃၀)ရထားပေါ်ကသရဲများ (ဒေ၀တာ) (၃၁)ကိတ္တိမ - ၀ိညာဉ်ရှိုက်သံ (၃၂)ကပျက်ယပျက်ပဉ္စလက်မျက်နှာ (၃၃)ကိုးသင်္ချိုင်းသံသေဓား (၃၄)ဂမုန်း စားဘီလူး. (၃၅)ဆယ့်နှစ်ကြိုးမှော်ရုံ. (၃၆)နဒီပြင်မျက်နှာရိုင်းလှိုင်းဝတ်ညာဉ်လမ်း (၃၇)နာဂသေနကျောက်မောင်နှမ (၃၈)ပတ္တမြားသပိတ်တော် (၃၉)ပလ္လင်သုံးဆင့် မြိုင်သေလာ (၄၀)ပုဏ္ဏကကျွန်းမှ မရဏကျောက်ရေအိုင် (၄၁)ဖိုးရွှေတောင်..တောင်လုံးကျော်..မှော် (၄၂)ဘူတဝါဟနမဟာမြိုင် (၄၃)မင်းစိတြရွှေမျက်နှာဖုံး (၄၄)မဖဲဝါနှင့် ဝေမာနိကရန်ငြိုး (၄၅)မရဏစက်ကွင်း (၄၆)မရဏထောင်ချောက် (၄၇)မလုပ်ကောင်းသောလယ်ကြီး. (၄၈)မှန်ကင်းစံနှင့် မရဏတမန် ပတ္တမြား (၄၉)မဟူရာဝံပုလွေဝိညာဉ်. (၅၀)မဟူရာတောင်မှပင့်ကူနက်ဒေဝီ (၅၁)မဟူရာမှော်ဝင်အရုပ် (၅၂)မဟော်ဂနီလမ်း. (၅၃)မြနန်းရှင်ဒေဝီ. (၅၄)မြနန်းရှင်နှင့်ဖိုဝင်မှားသောမိစ္ဆာ. (၅၅)မြနှင်းဖြူ၊ မြသင်းကြူ၊ မြဝင်းသူ. (၅၆)ရာဇူတိုင်မှရေသရဲ. (၅၇)လူပြိတ္တာတောင်ကြား (၅၈)လူသားစားရေလက်ကြား (၅၉)ဝင်းဂိတ်၏ပျောက်ဆုံးနေသောရတနာ (၆၀)ဝံပုလွေအသည်းနှင့် ချစ်သူ. (၆၁)ဝိညာဉ်ရန်ငြိုးနှင့် မိုင်တိုင်အမှတ်(၂၂၈) (၆၂)ဝိညာဉ်ကြီးနှင့် အငြိုးမာယာ (၆၃) တြိစက္က ဆယ့်နှစ်ကြိုးမှော်ရုံ. (၆၄) သင်္ဂါပါလသံယောဇဉ် (၆၅)သတ္တမမြောက်နဂါးလည်ဆစ်. (၆၆)သုံးခါသေ သုးံခါထွက်မည့်သူ (၆၇)သူယောင်မယ်ချစ်သူ (၆၈) အင်းဘီလူးနှင့်ကုမ္ဘီလပုရပိုက်. (၆၉)အငြိုးတစ်ရစ် အချစ်ဧကရီ. (၇၀)အဒြနက္ခတ်၏မိစ္ဆာရုပ်ထု. (၇၁)အရိုးတောင်ကျိန်စာ (၇၂)အသူရကာယ်ဘုံသား. (၇၃)ဥပါဒါန်အဆိပ်လမ်း (၇၄)ကျောက်ဘီလူးကျွန်း. (၇၅)နေမိန္ဒရငရဲတွင်း. (၇၆)ပေါရိသာရလမ်း (၇၇) ဘောဂဝတီဒေဝီ. (၇၈)မျောက်တစ်ရာမှတစ်ပွဲစားတာတေ. (၇၉) ရွှေလောင်းကိုးစီး ငွေလောင်းကိုးစီး (၈၀)သွေးစက်ဝင်္ဂပါ (၈၁)နှင်းတလိုက်နှင့်တိမ်တိုက်ကမှောင် (၈၂)နှင့်ဖြူတောင်မာလာရှင်. (၈၃)နှစ်ဆောင်ပြိုင်ကျတ်ကုန်း. (၈၄)မှော်ဝင်မြို့-စာအုပ်များ
မြန်မာ Ebook များ
ရောသမစိုး fb နေ့စဉ်
ရောသမ ဆိုဒ် (၂)
ဒီနေ့ ပေါက်ဈေး ဘယ်လောက်လဲ
ယနေ့ ကမ္ဘာ့ရွှေ ငွေဈေးနှုန်း
နိုင်ငံတကာ Phone Codes များ
ကလစ်လေး တချက် ပေးခဲ့ပါလားဟင်
Your IP Address Is Here
ရောရောသမမွှေ ဘလော့ဂ်ကို လာရောက်အားပေးကြတဲ့ မိတ်ဆွေများကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ